Kedu onye kachasị ike na ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Kedu onye kachasị ike na ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
The Advertising Specialty Institute® (ASI), kasị ukwuu agụmakwụkwọ, mgbasa ozi na ahịa nzukọ na-eje ozi $20.7 ijeri ngwaahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ, taa mara ọkwa kwa afọ Power 50 ndepụta nke ụlọ ọrụ kasị emetụta ndị isi. Phil Koosed, onye nchoputa nke BAMKO na onye isi atụmatụ nke ụlọ ọrụ nne na nna ya, Superior Group of Companies, ka akpọrọ No. 1 n'etiti ndị ụlọ ọrụ kacha ike.
Ndị ọzọ nke ise kachasị elu nwere ndị isi ụlọ ọrụ nwere mmetụta dị ukwuu. Ha bụ, n'usoro: Jonathan Isaacson, CEO / onyeisi oche nke Gemline; Jo-an Lantz, CEO / onyeisi oche nke Geiger; Jeremy Lott, onyeisi oche/CEO nke SanMar; na Marc Simon, CEO nke HALO Branded Solutions.
Ọkwa pụrụiche nke afọ a nwere ndị isi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị rụpụtarala azụmaahịa ha nke ọma n'oge ọrịa coronavirus. Ọchịchị Koosed dị mkpa maka BAMKO ịbanye na PPE, nke nyere aka na ụlọ ọrụ ahụ na-abawanye ego nkwalite North America kwa afọ 78.5% ruo $ 194 nde na 2020 - mmụba kachasị elu nke afọ karịa afọ nke ụlọ ọrụ 40 kacha elu.
"Ekele dịrị ndị isi niile, ndị ọhụụ na ndị mmeri ụlọ ọrụ gụnyere na ike a ma ama 50. Ha bụ ndị kasị mma nke kacha mma," ka Timothy M. Andrews, onyeisi oche ASI na CEO kwuru.
Ụlọ ọrụ ngwaahịa promo nwere ndị na-ebubata, ndị na-emepụta, isi na/ma ọ bụ akara ngwaahịa na ndị nkesa na-ere ma na-ere ngwaahịa ndị ahụ nye ndị ahịa. Ụdị kacha ukwuu n'ụwa, yana ndị anaghị akwụ ụgwọ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na obere azụmaahịa, na-enyekarị ngwaahịa nkwado akara iji kpọsaa ụlọ ọrụ ma ọ bụ mmemme na ikele ndị ọrụ na ndị ahịa.
ASI kpughere Onye Ndụmọdụ 2021 Power 50 n'oge Mgbakọ Ike ASI mebere. Ihe omume izizi ụlọ ọrụ mgbasa ozi gosipụtara isi okwu Richard Montañez, onye bilitere na onye nlekọta na Frito-Lay ruo osote onye isi oche nke PepsiCo.
Ewebata ya na 2006, Onye Ndụmọdụ Ike 50 kwa afọ na-ahụ maka ndị na-ekesa ọkụ na ndị na-ebubata ngwaahịa ndị na-enwe mmetụta dị ukwuu na ahịa mgbasa ozi.